Izindaba - Siyisinqumo sakho esihle sokuthenga izinto ze-luminescent eChina
1. Sigxila ezintweni ezikhanyayo kuphela. Sine iminyaka engaphezu kwengu-15 yesipiliyoni sezobuchwepheshe ezintweni ezibonakalayo. Sinamakhono ezintweni zokukhanya. Amandla ethu futhi ayizinto ezikhanyayo.
2, Ngokuthengisa izinto ze-luminescent, singabantu abaqeqeshiwe ngokwengeziwe. Sisebenza kahle ngoba sizinikele. Sinaka ukugqama komkhiqizo, futhi ukuqina komkhiqizo. Ngokusekelwe ekuqinisekiseni ukukhanya okukhanyayo nesikhathi esikhanyayo, sinaka kakhulu izici eziyisisekelo zomkhiqizo. Isibonelo, ifilimu elikhanyayo, asigcini nje ngokukhazimula okuhle, uma siqhathaniswa nefilimu lokukhangisa yendabuko, futhi linezici zefilimu lokukhangisa yendabuko: kulula ukuphrinta, kulula ukuphrinta, anti-ukuguga okunjalo nokunye.
3, Siyavumelana nezimo. Sithatha izinqumo ezisheshayo futhi kwenziwa kahle.
4. Ikhono ukulethwa oda liqinile. Sihlala siletha izimpahla zakho kuwe ngekhwalithi nenani okungenani ngesikhathi ngemuva kokuthola i-oda.
5. Ukuphatha umqondo wokuphatha ukuvikela izintshisekelo zamakhasimende: ikhwalithi yomkhiqizo kuqala, ukuqinisekisa ukuqina komkhiqizo nekhwalithi njengesiqalo. Ukuqina komkhiqizo kungumthombo wazo zonke izintshisekelo. Njalo gxila ezithakazelweni zamakhasimende. Qinisekisa izintshisekelo eziyisisekelo zamakhasimende futhi uthuthukise iphuzu lenzuzo lemikhiqizo. Imodi yoku-cyclic oda ye-PDCA.
5. Ifilosofi yokuphatha ukuvikela izintshisekelo zamakhasimende: ikhwalithi yomkhiqizo kuqala, ukuqinisekisa ukuqina komkhiqizo nekhwalithi njengengqangi. Ukuqina komkhiqizo kungumthombo wazo zonke izintshisekelo. Njalo gxila ezithakazelweni zamakhasimende. Qinisekisa izintshisekelo eziyisisekelo zamakhasimende futhi uthuthukise iphuzu lenzuzo lemikhiqizo. I-PDCA ingaphinde isebenze kabusha kumodi yoku-oda.
I-6, Amandla amakhulu enkampani ayisiqinisekiso sezintshisekelo zawo wonke amakhasimende.